“Waxaan u baahannahay inaan ooyno maxaa yeelay riyadeenna ayaa rumowday” – Mauricio Pochettino – Gool FM
(Yurub) 25 Maarso 2019. Tababare Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu dareemay inuu ooynayo kaddib markii uu daawaday kulankii furitaanka garoonka cusub ee kooxdiisa Tottenham kaasoo ugu dambeyn marti geliyey kulankii ugu horreeyey kubadda cagta.
Taageerayaal gaaraya 28,987 ayaa u soo daawasho tagay kulankii xiddigaha ay da’doodu ka hooseyso 18-ka sano ee Tottenham ay 3-1 ku garaaceen Southampton U18 kulankii ugu horreeyey ee uu lagu qabto garoonka cusub ee Tottenham.
Garoonka White Hart Lane ayaa 679 maalmood kaddib markii lagu ciyaaray kulankii ugu dambeeyey waxa uu marti geliyey ciyaartiisii ugu horreeyey tan iyo markii dib loo dhisay macallin Pochettino oo ka qeyb galay kulankii furitaanka ayaana farxad la ilmeyn gaaray.
“Dhammaanteen waxaan dareennay dareen isku mid ah, aad ayaan u faraxsannahay, waxaan dareemay isla dareenkeygii markii aan ka soo tagnay White Hart Lane maalintii ugu dambeysay, waan ooynaynaa, iminkana maalintii ugu horreysay ee garoonkeenna cusub waxaan dareemaynaa dareen isku mid ah,” ayuu yiri Pochettino intii lagu maqnaa qeybtii nashada ee ciyaarta.
“Waxaan u baahannahay inaan ooyno maxaa yeelay riyadeenna ayaa rumowday.” ayuu hadalkiisa sii raaciyey tababare Pochettino.
Kulanka ugu horreeya ee kooxda waa weyn ayey kooxda Tottenham waxa ay kulan ka tirsan horyaalka Premier League garoonkan 3 bisha April kula ciyaari doontaa dhiggeeda Crystal Palace.